China pp oghere mpempe akwụkwọ silk spins oyi akwa pad Manufacturer na Supplier | Sihai
Ngwunye mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka silk na-ahazi eme ka okpukpu abụọ pp pp oghere mpempe akwụkwọ na-emekọ ọnụ, mpempe akwụkwọ oyi akwa nwere ọtụtụ oghere na bọọdụ oyi akwa abụọ, otu akụkụ bụ nnukwu oghere, akụkụ ọzọ bụ obere oghere maka idozi spins mgbe ị na-akwakọ pallets, ọ dị mma maka idozi spins na ichebe spins na mbupu. Nọmalị, na spins oyi akwa na mpe mpe akwa bụ 4-6mm oké pp corrugated osisi diecut ahaziri mere, ọ ga-eme ka ike na-na omenala logo ebipụta.
The silk spins oyi akwa na-mere site p oghere mpempe akwụkwọ, o nwere ìhè arọ, waterproof, inogide, ike, edo ọkpụrụkpụ, ezigbo elu, ezigbo okpomọkụ na-eguzogide, elu n'ibu ike, magburu onwe chemical kwụsie ike na eletriki mkpuchi, na-abụghị ndị na-egbu egbu e ji mara. Ọ nwere ike ịbụ dị ka dị iche iche ngwa tinye ESD ihe mere ESD pp oghere mpempe akwụkwọ mpe mpe akwa, tinye UV ihe mere UV echebe pp corrugated mpempe akwụkwọ oyi akwa na mpe mpe akwa maka n'èzí na-eji.
Nke gara aga: pp oghere oyi akwa
Osote: pp corrugated osisi nche